Sghọta Ohere | Martech Zone
Ọ na-ada obere hokey mgbe ndị mmadụ na-akọwa asntanetị dị ka Webosphere ma ọ bụ ndị na-ede blọgụ dị ka Blogosphere. Otú ọ dị, e nwere n'ezie ọkwa ndị na-apụta ìhè. Dika ihe nlere nke weebụsaịtị gi na-eto eto, ndi nleta na-ebido ileta otutu oge ma na-adọta otutu dollar.
O siri ike ịgbawa shei nke ọ bụla n'ígwé, ọ bụ ezie. Na-ewu weebụsaịtị ma ọ bụ blog ma ọ na-anọdụkarị n'enweghị ndị ọbịa ma ọ bụ mma ruo mgbe akpọ òkù na. invitationkù ahụ na-abịa n'ụzọ nke weebụsaịtị ndị ọzọ, adịkarịghị site n'ụzọ ọ bụla. Companieslọ ọrụ mgbasa ozi bụ ma e wezụga. Companieslọ ọrụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ekesaala kesaa ya wee nwee ike iwepụta nkesa ahụ iji wuo ntọala na weebụ.
Na nwute, mgbasa ozi ọdịnala adịghị nwayọ ịmalite, agbanyeghị, yabụ na ha akwụgoro nke ọma iji nwetaghachị ike ha tufuru. Ndị folks nwere obi ụtọ ịbanye na webụ n'oge (ụfọdụ nwere ọtụtụ na enweghị ikike ma ọ bụ nnukwu ngwaahịa) ka na-erite uru. Ha bụ ndị ọsụ ụzọ kwuru na ha nwere oke ala ahụ bara nnukwu uru taa.
Ndị ọkachamara njikarịcha njin ọchụchọ, ndị na-ede blọgụ ọhụrụ, yana ụlọ ọrụ e-commerce na-aga nke ọma ghọtara na ụzọ isi wuo ụlọ ọrụ ịntanetị na-aga nke ọma bụ iji nwayọ gbapụ n'akụkụ ọ bụla iji banye nke ọzọ. Otutu ihe omumu site na 'afu' mbu bu mmeghe nke otutu umuaka rockstars mere, obu ezie na ogwugwu enweghi ego anakpo na mbido. Ha rutere ebe ahụ buru ụzọ see chaatị, ma ha enweghị ike igbochi ha ịbịa.
Web 2.0 nwere ike ịbụ ngwakọta nke teknụzụ na mmetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mana ọ bụ ihe gbasara itinyeghachi isi obodo na iwepụ na ngalaba nke ngalaba. Nwere ike imebi site na oyi akwa ebe a na ebe ahụ site na ịkwụ ụgwọ maka ya, mana ị ga-akwagide ọhụụ ọhụụ ọhụụ gị wee gaa n'ihu na-agbanye na akwa ọzọ. Y’oburu na ibu onye ocha ohuru ma obu onye nzuzu ecommerce, it agbanweghi. “Ebe a na-eli ozu weebụ” jupụtara na coms dot na-aghọtaghị na nke a bụ marathon na ọ bụghị ịgba ọsọ.
A naghị ekesa ntị na ego ọbụla. Ntị na web bụ ihe dịka otu afọ 10 jupụtara na achicha na Mountain Dew na ụbọchị ọmụmụ. Ego na-adịwanye oke karịa ka ị na-erute nso n'etiti gburugburu. Tupu web, anyị enweghị ohere ịnweta ego ahụ, anyị amadịghị ebe ọ dị took ọ were ọtụtụ ọgbọ nke mmetụta na njikọ iji kpochapu. O were ụzọ ụzọ ziri ezi na ndị ziri ezi ọ chọtara. Na weebụ, ọ dị iche, agbanyeghị.
The Webosphere na-eche na-esote nnukwu ihe. Akụrụngwa niile dị ebe ichere ma chọta nke ọzọ nnukwu ihe. Nchọgharị ọchụchọ na teknụzụ dị ka Digg bụ ndị kacha pụta ìhè. Google na-ewulite ngwa oge ọ bụla ị tụgharịrị iji lekwasị anya n'etiti onwe ha na asọmpi ha. Mụ na gị enweghị akụ iji zoo Google. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ọ bụla enweghị web ma ọ bụ na ha nwere ike ịsọ mpi na ngwaahịa dị ukwuu, nnukwu echiche na ndị na-arụsi ọrụ ike iji weta ha n'ahịa.
Okwu ọ bụla na ibe blog gị pụọ na akwa ọzọ. Mgbanwe mgbanwe ọ bụla nke na-adọta onye ọbịa ọzọ na-enyere aka mgbawa na akwa. Mgbanwe ọ bụla na-ebuli blọọgụ gị ịchọta ibe efep. Oge ọ bụla ị nwetara trackback, ọ na-apụ apụ. Oge ọ bụla ị kwuru okwu na blọọgụ ọzọ, ọ ga-apụ apụ. Site na webosphere, na blogosphere, iji nweta ndị na-agụ akwụkwọ, ọbụlagodi ịme A-Ndepụta nke ndị na-ede blọgụ - njem ahụ dị ogologo. Ma onye ọ bụla n’ime anyị nwere ike ime ya.
Ihe ọzọ mara mma gbasara okirikiri bụ na ike ndọda na-abawanye ka ị na-eru nso na etiti ahụ. Otu ụbọchị, edepụtara blọgụ gị 500,000 na ọnwa isii ka ọ dị na 5,000. Ọtụtụ mmadụ ga-agwụ uzu ọkụ, echiche ha ga-agwụ, ego ga-agwụ ha, ma ọ bụ na-eyizi abụ ha na chaatị dị iche iche.
Ọ bụ mbe na bekee… mbe nwere ya! Na-chipping pụọ!
dnScoop na-ekwu dnScoop.com anaghị aba uru ọ bụla
Egwu Na-atụ Egwu: Identdị Amata na Internetntanetị
Feb 28, 2007 n’elekere 1:19 nke abali
Ikekwe site na nwute m na-ahụ SEO / ahịa / blọọgụ azụmahịa n'ịntanetị (otu ndị na-achị achị) na-achịkwa blogosphere. Ọ bụ ezie na blọọgụ nkwado na-eme naanị ntakịrị akụkụ nke ọnụọgụ nke ndị ọrụ na-ewepụta ọdịnaya ha na-anọchite anya ya na nyocha mmekọrịta dịka nyocha blog, ụtọ & teknụzụ.
SEO na-achịkwa engines ọchụchọ, ọ bụ ya mere eji akpọ ha njikarịcha ọchụchọ. Anaghị m ekwu na nke a bụ ihe ọjọọ, ọ dị mma ịnwe nguzozi.
Feb 28, 2007 n’elekere 4:38 nke abali
Mpempe akwụkwọ nkwado. Ọ na-amasị m ka ị si jiri anya gị hụ ọdịdị ya na ọrụ anyị na-arụ nke na-agbakwunye na "chipping" nke akwa ndị a.
Sterling "Mgbawa" Camden
Feb 28, 2007 na 2:32 PM
Feb 28, 2007 na 3:30 PM